Gbasara Anyị - Nde Ndị Mere | MM Solutions INC, mm mm, mm mm, mm mm, mm, mm mm, mm mm, mm
Ebumnuche anyị bụ idozi nsogbu ndị kachasị sie ike nke onye ahịa anyị na inye ahụmịhe kachasị mma.
Mpụga mbata na ọpụpụ mbata na ọpụpụ: 22,156.
Ngwọta Iwu: 19,132.
Ihe omume: 1,000+
Ngwọta maka ụlọ ọrụ, enyere: 86,742
Ọrụ na Ngwọta
Site na ahụmịhe anyị dị ukwuu na ọrụ dị iche iche ụlọ ọrụ anyị nyere dị ka e kwuru n’elu, anyị na-enyere ndị mmadụ n'otu n'otu, ezinụlọ na azụmaahịa aka site na ọkachamara anyị iji mee ka ịkwaga, ịkwagide, gbasaa ma too, anyị nwere ọnọdụ dị mma iji duzie gị na ụzọ ịga nke ọma. Ma ị nwere mmasị ịkwaga, nnabata na nnweta ma ọ bụ na-achọ ịhapụ usoro ọrụ azụ gị, ịchọ onye isi obodo ma ọ bụ onye nwere usoro ma ọ bụ ịchọ atụmatụ nke ọgbọ ọzọ, nyocha ego na nkwado ma ọ bụ chọọ ọrụ ụlọ ma ọ bụ ọrụ metụtara ọpụpụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ ná mba ọzọ ma ọ bụ usoro IT nwere ike inyere gị aka na ọrụ niile dị na asọmpi kachasị ọnụ.
Anyi doro anya ma doo anya gbasara usoro anyị ma nwee nchekwube isi na - esote azịza ọtụtụ ajụjụ ndị kachasị mkpa
Anyị na-agba mbọ na anyị "Usoro ụkpụrụ maka ndị ahịa anyị na-ebu ụzọ mgbe niile"
Anyị na-agbaso usoro, ụzọ dị irè ma sie ike nke na-arụ ọrụ maka ọdịmma kasịnụ maka ndị ahịa anyị na ezinụlọ ha dị ka ụzọ kachasị mma ga-esi nweta ya.
Anyị guzoro dị ka nkwa maka onye ọ bụla, ọ bụla n'otu n'otu, ezinụlọ, azụmahịa, ndị mmekọ na ndị otu.
Communicationsọ nkwukọrịta ọsọsọ na nkenke.
Ihe nzuzo data dị anyị ezigbo mkpa.
Emelitere banyere iwu mba ụwa ugbu a.
Anyị bụ Ọkachasị nwere ọzụmaahịa azụmahịa pụrụ iche.
Emebere ahaziri iche maka ndị ahịa anyị niile na ezinụlọ ha.
Olee otu anyị si arụ ọrụ
Anyị ga-aghọta gị, azụmaahịa gị na ebumnuche gị kpam kpam tupu anyị na-atụle nhọrọ ma ọ bụ ohere ga-ekwe omume.
Anyị na-arụ ọrụ ọmịiko na ndidi na onye ahịa anyị, azịza ajụjụ gị niile na obere oge kachasị mma yana ngwọta kachasị mma dabara na ihe ị chọrọ na ọnọdụ gị.
Anyị bụ ebumnuche zuru oke, na-arụ ọrụ nke ọma.
Anyị na-elekwasị anya naanị na ngwọta kachasị mfe na nke kachasị mma, maka ndị ahịa anyị.
Site na njikọta pụrụ iche na iguzoro na ụlọ ọrụ ndị anyị mepere emepe, anyị na-enye ndị ahịa anyị ohere ịnweta mmiri nke atụmanya zuru oke.
Biko gụọ maka usoro eji arụ ọrụ maka ndị ahịa na ndị mmekọ anyị ọrụ anyị .
Ngwọta anyị maka ndị mmadụ n'otu n'otu, ezinụlọ na ụlọ ọrụ
Ngwọta ahaziri iche
Azụmaahịa maka Ahịa / Zụrụ
Ọrụ niile na Ngwọta
Mba 96 na United States 28
Akaụntụ Bank na mba 95 na USA 28
I nwere ahia gha ibanye, ka anyi ghaziere gi ihe mgbagwoju anya nke usoro HR.
Jiri Job Portal anyị anaghị akwụ ụgwọ iji chọọ ndị ọrụ ebe ọ bụla n'ụwa.
Ọfịs Virtual na adres 64 na-adọrọ mmasị n'ụwa niile
Akara Akara Mbido Onye Ego Ngo si $ 200
Weebụsaịtị ahaziri iche
Ahaziri iche na nke puru iche bidoro $ 200
Akaụntụ Ahịa na Paymentkwụ Paymentgwọ Paymentkwụ Paymentgwọ
Nkwenye ịkwụ ụgwọ na mba 190
Nọmba Virtual maka obodo 89 na obodo 290.
Anyị na-ewepụta azịza CRM na ntinye iji mee ka ị nwekwuo ike ịchịkwa azụmahịa gị.
Anyị na ndị na-eme nde Nde na-ebu ụzọ lekwasị anya n'ime ka azụmahịa bụrụ nke ọma.
Ngwọta Isi Obodo na-arụ ọrụ
Anyị nwere netwọkụ na mmekọrịta siri ike na ụlọ ọrụ ego maka mkpa ego isi ego gị.
Inye ego na akụrụngwa ga-enyere gị aka ichekwa ego gị maka mkpa azụmaahịa dị iche iche.
Ndi okacha amara n’uche anyi nwere mmetuta di omimi banyere akwukwo, taata, aku n’uba na amuma.
Emechaala oru oma 1000+
Anyị na-ahazi ọrụ iwu dị ala maka ezinaụlọ, Otu dị iche iche, ụmụ akwụkwọ, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ.
Anyị na-ewetara gị ihe ọ bụla ụdị ọrụ ego dị mma.
Anyị na-akwado ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ maka ịchọta ohere na oghere ndị ọzọ, n'otu n'otu.
Ndị otu anyị na-enye ụzọ dị iche iche esi edozi azụmahịa azụmaahịa zuru ụwa ọnụ
Anyị na-enyere gị aka ịchọta ndị isi nchịkwa ziri ezi nke na-ekwupụta ikike dị elu achọrọ maka uto nke azụmaahịa.
Anyị na-enye ọtụtụ ọrụ iji nyere ndị ahịa aka ịmalite na nkwekọrịta ọrụ, njikwa HR, ịkwụ ụgwọ na ụtụ isi.
Jiri ihe omuma nke ulo oru anyi gosiputara na usoro ndi omara enwetara.
Anyị na-akwado ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ maka ịchọta ohere
Anyị na-enye ọrụ na ndụmọdụ maka azụmahịa maka ịtọlite ​​azụmahịa, mgbasawanye na uto.
Ndị otu anyị na-enye ọtụtụ azịza azụmahịa zuru ụwa ọnụ nke ga-eme ka azụmahịa gị nwee ihe ịga nke ọma.
Anyị na-enyere gị aka ịchọta ndị isi nchịkwa ziri ezi nke na-ekwupụta ikike dị elu achọrọ maka uto nke azụmaahịa
Nọmba Virtual maka obodo 89 na obodo 290
Poratelọ ọrụ na ihe okike, mmeghachi omume, ebugharị na SEO OPTIMIZED
Otu onye na-eweta ihe ngwọta maka ịnye ahịa ahịa
Ngwọta Ecommerce nke ogo mba ụwa
Mepụtara ihe karịrị 351+ ngwa maka ndị ahịa ụwa anyị.
Injinia ngwaahịa nke ngwanrọ site na nyocha gaa mmepe, nnwale na devOps.
Ọdịdị ntanetị na ntanetị nke ngwaahịa gị na ọgbọ nke ndị na-eduga.
Nweghachite nha azumahia di elu na ego nnata
Ihe ngwọta ahaziri Blockchain, agbanyeghị ụlọ ọrụ gị.
Portlọ Reallọ Ahịa
Melite ihe omuma gi gbasara oru di iche iche anyi n’enye.
Mara banyere ihe omume mba nile.
Nweta akụkọ kachasị ọhụrụ na mbata na ọpụpụ, agụmakwụkwọ, usoro azụmahịa, HR, mgbanwe azụmahịa mba ụwa na-emetụta anyị niile, na ndị ọzọ.
Kpọọ ndị enyi gị, ndị ọrụ ibe gị, ezinụlọ gị ma mepụta azụmahịa ọhụrụ na kọntaktị mmekọrịta gị.
Atụmatụ azụmaahịa ọzọ, ọ nweghị ego itinye ego, onye anyị na ya na-arụ ọrụ
Ọ bụrụ na ị na-eji ọrụ anyị ọ bụla karịa ịdị gara gara na ọrụ nrube isi anaghị akwụ ụgwọ.
Ngwọta Ecommerce nke ogo mba ụwa.
Akaụntụ Ahịa na Paymentkwụ Gatezọ Paymentkwụ andgwọ na Paymentkwụ Paymentgwọ Paymentkwụ .gwọ
Anyị na-eweta azịza maka imechi ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ
Ọdịdị ntanetị na ntanetị nke ngwaahịa gị na ọgbọ nke ndị na-eduga
Ohere iji ree ahia / zoo ma zuo otu nke gi ma rite ego.
Họta otu gị n’ebe ọ bụla n’ụwa
Nweta Nkwalite azụmahịa na-akwụ ihe ruru $ 2000
Abụ m onye nwe ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ya, olee otu ị ga - esi nyere m aka?
Site na ahụmịhe anyị dị ukwuu na ọrụ dịgasị iche iche nke ụlọ ọrụ anyị nyere, anyị na-enyere ndị nwe ụlọ ahịa nọọrọ onwe ha aka ha na ezinụlọ ha ịmalite ụlọ ọrụ na ịmalite azụmahịa ọhụrụ, gbasaa, too ma kwado ọrụ ha, anyị nọ n'ọnọdụ nke ọma iji duzie gị n'okporo ụzọ ihe ịga nke ọma. Ma ị nwere mmasị na M&A, kwaga ebe ọzọ, na-achọ ibughachi azụ na obere ọrụ, na-achọ isi obodo ma ọ bụ onye mmekọ ma ọ bụ na-achọ atụmatụ ọgbọ gị ọzọ. Nke ahụ bụ ntakịrị ihe gbasara anyị.
Site na ahụmịhe anyị buru ibu, nka na ọtụtụ ọrụ nke mkpakọrịta na ụlọ ọrụ anyị nyere, anyị anọwo na-enyere ma na-eme ka ndị ahịa, ụlọ ọrụ na freelances, soro ezinụlọ ha tinye ụlọ ọrụ na ịtọlite ​​azụmaahịa ọhụrụ, gbasaa, na-eto ma na-akwagide azụmaahịa ha. na-achọ ọrụ, anyị nwere ọnọdụ nke ọma iji duzie gị n'ụzọ nke ịga nke ọma. Ma ị nwere mmasị na Mmalite na Nnweta, ịkwapụ, na-achọ ịhapụ ọrụ na nhazi ọ bụla, na-anwa ịchọta isi obodo ma ọ bụ usoro mmekọrịta ma ọ bụ na-achọ atụmatụ ọgbọ ọzọ, ma ọ bụ na-achọ ndụmọdụ na ala ma ọ bụ Ọrụ mbata na ọpụpụ ma ọ bụ Mmụta Ọpụpụ ma ọ bụ IT Ọrụ anyị nwere ike ịnyere gị aka na ọrụ niile ekwuru.
Anyị na-enye ndị ahịa mba ụwa na ndị mmekọ anyị nke ọrụ dị iche iche ọrụ nke gụnyere ndị mmadụ, ndị na-achụ ego, ego itinye ego / ego VC, ụlọ ọrụ na Corporates. Incase, nke oru ndi kwesiri ntukwasi obi na nke nwere ike iru, anyi puru inye aka na mmekorita na uru.